रौतहट – रौतहटमा अत्याधिक चिसोको कारण कठ्याग्रिएर डेढ महिनाको नवजात शिशुसहित २ जनाको ज्यान गएको छ। यससँगै चिसोबाट रौतहटमा मर्नेको संख्या २३ पुगेको छ। कठ्याँग्रिदो चिसोबाट मंगलबार राति गौर नगरपालिका वडा नम्बर ७ सिसवाटोलका भाग्यनारायण दुबेको डेढ महिनाको नवजात नाति अनुराग दुवे र गरुडा नगरपालिका ५ महम्मदपुरका ५१ बर्षीय तेजा ठाकुर हजामको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। नवजात शिशु आफनो आमासंग सुतिरहेको अवस्थामा कठ्याँग्रिएर मुर्छित भएपछि उपचारको लागि तत्कालै गौर आस्पतालमा ल्याउदै गर्दा बाटोमै उनको ज्यान गएको जिल्ला अस्पताल गौरले जनाएको छ। यसैगरी खाना ...
माघ ३ –चितवनको रत्ननगरस्थित सौराहामा हालै सम्पन्न चितवन हात्ती महोत्सवमा रु तीन लाख नाफा भएको छ । क्षेत्रीय होटल संघ चितवनको आयोजनामा पुस ११ देखि १५ गतेसम्म चलेको १४औँ चितवन हात्ती महोत्सवको मंगलबार आयव्यय सर्वजनिक गर्दै संघले रु तीन लाख तीन हजार ८४५ नाफा भएको जनाएको छ । चितवनको सौराहामा संघको मंगलबार भएको सोह्रौँ वार्षिक साधारणसभाका क्रममा सहकोषाध्यक्ष गंगा गिरीले हात्ती महोत्सवमा कूल रु ३८ लाख ७८ हजार ७०० आम्दानी भएको र रु ३५ लाख ७४ हजार ८५५ खर्च भएको जानकारी दिनुभयो । धेरै हात्तीका गतिविधि समेटेर आयोजना ...
माघ ३ –चितवनको नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि पुनः रातिमा ६ घण्टा बन्द हुने भएको छ । माघेसङ्क्रान्ति पर्वका कारण चार दिन खुला गरिएको उक्त सडक आजदेखि पुनः राति १० देखि ४ बजेसम्म बन्द रहने नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाका प्रमुख चन्द्रनारायण यादवले जानकारी दिनुभयो । यसअघि देवघाटको माघी मेलालाई ध्यानमा राखेर पुस २९ देखि माघ २ गतेसम्म चार दिनका लागि उक्त सडक खुला गरिएको थियो । “आज राति १० बजेदेखि बन्द गरेर भित्तो काट्ने काम शुरु हुने भएकाले सो समय नपर्नेे गरी समय मिलाएर हिँड्न सवारी चालकलाई आग्रह गर्दछु”, यादवले ...
सिँचाइ सुविधा पुगेपछि कृषकलाई राहत
माघ ३ –वर्षौंदेखि बाँझिएका जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेपछि रामपुर नगरपालिका–१० हेक्लाङ क्षेत्रका १२८ घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । पर्याप्त जमिन हुँदाहँुदै पनि सिँचाइ सुविधा नहुँदा निराश बनेका यहाँका कृषकलाई अहिले सिँचाइका कारण राहत मिलेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत मकै पकेट क्षेत्र कार्यक्रमको साना सिँचाइ आयोजनाबाट कुलो निर्माण तथा मर्मत गरिएको हो । यहाँ बराहदेवी खायन मकै पकेट क्षेत्र खेतखण्ड र दुर्गादेवी मन्दिर खायन बारीखण्ड गरी दुईवटा पकेट क्षेत्रमा करिब ४०० रोपनी क्षेत्रफलमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनमा छ । “कुलो पक्की नहुँदा मुहानदेखि नै पानी ...
ठगी आरोपमा भारतीय नागरिक पक्राउ
कपिलवस्तु : ठगी आरोपमा पक्राउ परेका एक भारतीय नागरिकलाई वडा प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटाले सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भारतको गोरखपुर थाना शाहपुर कौवाबाघ आरपीएफ कलोनी क्वार नम्बर ३९ डी.सी. बस्ने २८ वर्षीय अजितकुमार सिंह रहेको प्रहरीले जनाएको छ। कपिलवस्तुको चन्द्रौटास्थित जस्मिन मनी ट्रान्सफरबाट रकम झिक्ने क्रममा विशेष सूचनाका आधारमा वडा प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटाले पुस ३० गते सिंहलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। पक्राउ परेका उनको साथबाट प्रहरीले ५५ हजार रुपैयाँ, नक्कली कागजपत्र बरामद गरेको पनि प्रहरीले बताएको छ। उनलाई जिल्ला अदालत तौलिहवाबाट ठगी मुद्धामा म्याद थप गरी अनुसन्धान ...
भक्तपुर : भक्तपुरमा माटो व्यवसायमा संलग्न एक व्यवसायीको शव फेला परेको छ । माटो व्यवसायी चाँगुनारायण नगरपालिका–९ ताथली बस्ने ५५ वर्षीय सीताराम सैंजूको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरले हत्या भएको आशंकामा तीनजनालाई पक्राउ गरेको छ । बिहान ५ बजे सैंजूको शव भक्तपुर नगरपालिका–९ ब्रह्मायणीमा घोप्टो परेको अवस्थामा भेटिएको प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रमुख नायव प्रहरी उपरीक्षक दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा ढुंगाले हानेर हत्या गरेको आशंका गरेको छ । मृतकको टाउकोको पछाडि गम्भीर चोट लागेको प्रहरीले जनाएको छ ...
लहान : सिरहा बरियारपट्टी गाउँपालिका–२ जानकीनगरमा मंगलबार साँझ एक महिलाको शव फेला परेको छ । जानकीनगरस्थित विनयकुमार रायको माछा पोखरीमा फेला परेको शवको सनाखत हुन सकेको छैन् । शव परीक्षणका लागि लहानस्थित अस्पतालमा ल्याइएको र घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । source; annapurnanews.com
बाघको छाला र हड्डीसहित दुई पक्राउ
गोरखा : तनहुँको आबुखैरेनीबाट तीनवटा ध्वाँसे बाघको छाला र हड्डीसहित मंगलबार दुई जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा गोरखा सुलिकोट गाउँपालिकास्थित बारपाकका ३५ वर्षीय इतबहादुर घले र नुवाकोट सुनखानीका २८ वर्षीय भीमबहादुर तामाङ रहेका छन् । बा १५ च ७४५६ नम्बरको स्कारपियो गाडी खोजतलासका क्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय आबुखैरेनी र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) को संयुक्त टोलीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका दुबैलाई वन्यजन्तु ओसारपसार ऐनअनुसार कारबाही गर्न जिल्ला वन कार्यालयमा बुझाइएको प्रहरी निरीक्षक लोकबहादुर गुरुङले बताए । source; annapurnanews.com
३२ हजार घुस रकमसहित दुई पक्राउ
काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले ३२ हजार घुस रकमसहित दुईजना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय सुकेधारा काठमाडौंमा कार्यरत नायव सुब्बा यादव पौडेल र खरिदार सुमन पोख्रेललाई अख्तियारको टोलीले घुस रकमसहित पक्राउ गरेको हो। लेखापढी व्यवसायी अशोक कार्कीसँग विदेशी सवारी चालक अनुमति पत्र नेपालीकरण गरिदिने भन्दै घुसरकम लि‌इरहेको अवस्थामा अख्तियारको टोलीले कार्यालय परिसरबाटै पक्राउ गरेको हो। थप अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ। source; annapurnanews.com
सोलुखुम्बु – सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिका–२ बुङको पेल्माङ आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत दुई सय भन्दा बढी बालबालिका एक साथ बिरामी भएका छन् । शनिबारदेखि एक दुईजनामा रुघाखोकीको लक्षण देखिएको भए पनि आइतबारसम्म दुई सय भन्दा बढी बालबालिका प्रभावित भएपछि अभिभावकमा त्रास फैलिएको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सोताङबाट खटिएको स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले फ्लू हुन सक्ने आशांका गरेको छ । डा. सन्डु शेर्पाले सोमबार र मंगलबार गरी दुई सय भन्दा बढी बिरामीको परीक्षण गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले बालबालिकामा देखिएको लक्षणका आधारमा उपचार गरिरहेको बताउनुभयो । उच्च ज्वरो आउने, ...
रुपन्देही – बुटवलमा चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर पछिल्लो चार दिनमा पाँचजनाको ज्यान गएको छ । लुम्विनी अञ्चल अस्पताल बुटवलका सूचना अधिकृत लक्ष्मीराज रेग्मीका अनुसार ज्यान गुमाउनेमा एक महिला र चार पुरुष रहेका छन् । बुटवलको पुरानो र नयाँ बसपार्कमा एक/एक जना, देवीनगरमा एकजना, सिदेश्वर स्कुल नजिक एकजना र एकजना बुटवलमा मृत अवस्थामा भेटिएका हुन् । कसैको पनि अहिलेसम्म सनाखत भएको छैन । शव लुम्विनी अञ्चल अस्पताल बुटवलमा राखिएको छ । प्रहरीले ज्यान गुमाउने सबै सडकमा मागेर हिँड्ने रहेको हुनसक्ने अनुमान गरेको छ । source; ujyaaloonlinenews.com